ဆွဲဆောင် မှု ရှိ ရှိ ညို့အားပြင်း တဲ့ အ မိုက် စား Body ကို ချပြ လိုက် တဲ့ မင်းသမီး နေခြည်ရွှန်းလက် – The News Post
ပရိသတ်ကြီးရေ.. MRTV-4 မင်းသမီးချောလေးဖြစ်သလို ချစ်စရာကောင်းလွန်းပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နေခြည်ရွှန်းလက် ကိုတော့ အား လုံးပဲ အချစ် ပိုေ နကြ မှာပါနော်..။
နေခြည်လို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ပြည်သူ့အသည်းကျော်လေး သူမကတော့ ချောမောလှပတဲ့အပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလှလှလေးတွေနဲ့ ဆံနွယ်ရှည်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကြား အမြဲရေပ န်းစားနေ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတ ယ်နော်..။
ပရိသတ်အချစ်တော်လေး နေခြည်ကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း GYM ဆော့ရင်း ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါ တယ်နော် ..။အ ချိုးအ စားပြေပြစ်ပြီး ညို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေကတော့ တကယ်ကို ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိလွ န်းနေတာ မို့လည်း ပရိသ တ်တွေမှာလည်း သေ ဘာ ကျနေ ကြမှာပါနော်..။
“မင်းရဲ့ပါးပါး မားမား ဘယ်လိုပုံတွေတားတား ဖြတ်ကျော်သွားမှာ မရမကငါ..” ဆိုပြီး ဓာတ်ဖမ်းခါးတဲ့ သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို နေခြည်က ပြန်လည်မျှေ ဝထား ပါ. ။ညို့ အာြး ပင်း တဲ့အလှတရားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှရက်လွန်းနေတဲ့ နေခြည်ရွှန်းလက်ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေလည်း အချစ်ပိုသဘော ကျနေကြ မှာပါမို့ တင် ဆက်မျှဝေေ ပးလိုက် ပါတယ်နော်..။
Source – Nay Chi Shoon Lak’s Fb Account
Photo Credit – Ma Yoon Kay Khing
ပရိသတျကွီးရေ.. MRTV-4 မငျးသမီးခြောလေးဖွဈသလို ခဈြစရာကောငျးလှနျးပွီး သရုပျဆောငျကောငျးတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး နခွေညျရှနျးလကျ ကိုတော့ အား လုံးပဲ အခဈြ ပိုေ နကွ မှာပါနျော..။
နခွေညျလို့ အားလုံးက ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ ပွညျသူ့အသညျးကြျောလေး သူမကတော့ ခြောမောလှပတဲ့အပွငျ ခဈြစရာကောငျးတဲ့အပွုံးလှလှလေးတှနေဲ့ ဆံနှယျရှညျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားကာ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတရားတှကွေောငျ့လညျး ပရိသတျတှကွေား အမွဲရပေ နျးစားနေ သူလေးပဲ ဖွဈပါတ ယျနျော..။
ပရိသတျအခဈြတျောလေး နခွေညျကတော့ အခုတဈခါမှာလညျး GYM ဆော့ရငျး ဓာတျဖမျးထားတဲ့ သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ဖမျးစားလိုကျပွနျပါ တယျနျော ..။အ ခြိုးအ စားပွပွေဈပွီး ညို့အားပွငျးလှနျးတဲ့ သူမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှတှကေတော့ တကယျကို ဆှဲဆောငျမှုတှရှေိလှ နျးနတော မို့လညျး ပရိသ တျတှမှောလညျး သေ ဘာ ကနြေ ကွမှာပါနျော..။
“မငျးရဲ့ပါးပါး မားမား ဘယျလိုပုံတှတေားတား ဖွတျကြျောသှားမှာ မရမကငါ..” ဆိုပွီး ဓာတျဖမျးခါးတဲ့ သူမရဲ့အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို နခွေညျက ပွနျလညျမြှေ ဝထား ပါ. ။ညို့ အာွး ပငျး တဲ့အလှတရားတှနေဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိလှရကျလှနျးနတေဲ့ နခွေညျရှနျးလကျရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှလေညျး အခဈြပိုသဘော ကနြကွေ မှာပါမို့ တငျ ဆကျမြှဝေေ ပးလိုကျ ပါတယျနျော..။
ကပ်ကြီး သုံး ပါး ကျော် လွှားနိုင်ေ စဖို့ မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီး ၏ မိန့်မှာချက် များ